Rugby – «Gold Top 20»: haverina amin’ny alahady ny lalaon’ny Cosfa sy ny JSTA | NewsMada
Rugby – «Gold Top 20»: haverina amin’ny alahady ny lalaon’ny Cosfa sy ny JSTA
Miainga amin’ny isa nisarahana, 20 no ho 20, ny lalaon’ny JSTA Ambondrona sy ny Cosfa, ny alahady ho avy izao. Fihaonana haverina, noho ny tsy fahavitany hatramin’ny farany, ny alahady 2 desambra lasa teo.
Tapaka, nandritra ny fivoriana nataon’ny komity mpitantana eo anivon’ny Malagasy rugby, ny alatsinainy lasa teo, fa haverina amin’ny alahady 9 desambra ho avy izao, etsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny fihaonana eo amin’ny Cosfa (Bebaoty) sy ny JSTA Ambondrona. Lalao tafiditra ao anatin’ny dingana ampahefa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “Gold Top 20”.
Raha tsiahivina, tsy tontosa hatramin’ny farany ity lalao ity, ny alahady 2 desambra lasa teo, rehefa niditra teo amin’ny fanalavam-potoana, noho ny aizina efa nandrakotra ny kianja. Nisaraka ady sahala, 20 no ho 20, ny roa tonta, tamin’izay. Nifanarahan’ny ekipa roa tonta fa miainga amin’io isa 20 no ho 20 io ny fihaonana amin’ny alahady ho avy izao, ary holalaovina ny 40 mn indroa miditra.
Araka ny lalàna mifehy ny fifaninanana, tsy misy miova ny anaran’ireo mpilalao tao anaty “feuille de match” sy ireo mpitsara nitantana ny fihaonana.
Tsy maintsy fantatra amin’io izay ho ekipa fahefatra hiatrika ny manasa-dalana, amin’ity fifaninanam-pirenena ity, satria tsy maintsy alefa any amin’ny Aroi, mialoha ny faran’ity volana desambra ity, ny anaran’ireo ekipa roa hisolo tena an’i Madagasikara eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina “Top 6 Aroi”, amin’ny taona 2019. Tsiahivina fa ekipa telo no efa nahazo ny tapakila hiatrehany ny ankatoky ny famaranana: ny FTM Manjakaray, ny TFA Anatihazo ary ny FTA Andavamamba. Raha ny fandaharan-dalao eo amin’io manasa-dalana io, hifandona ny FTM sy ny TFA ary miandry izay tafavoaka eo amin’ny JSTA Ambondrona sy ny Cosfa kosa ry zareo FTA.